[IMIBONO] Kunabasakazi abazotatazela emisakazweni | Isolezwe
[IMIBONO] Kunabasakazi abazotatazela emisakazweni
EZEMISAKAZO / 12 March 2019, 4:21pm / SIZWE BLOSE
UGLEN Lewis ungomunye wabasakazi beRadio 2000 okumele bangatatazeli njengoba sekuzoqalwa phansi, kubuyekezwe izinkontileka ngenxa yokuthi wenza umsebenzi oncomekayo emsakazweni
SEKUQALILE ukuqagela ngokuzokwenzeka emsakazweni njengoba sisondela isikhathi sokuvuselelwa kwezinkontileka emisakazweni eminingi.
Yisikhathi esiza nenjabulo kwabanye abasakazi okuzokwenzeka babuyiselwe ezinhlelweni abazenzayo abazithokozelayo. Kwabanye kuzoba nokukhala uma bekhishwa ezinhlelweni abazenzayo.
Kuzokuba kubi kwabazotshelwa ukuthi abasadingeki emagcekeni emisakazo abayisebenzelayo. Yize isimo sinjalo kodwa ngicabanga ukuthi abasakazi beRadio 2000 abenza izinhlelo eziqala ngo-6 ekuseni ziphele ngo-6 ntambama asibakhathazi kakhulu lesi simo sokushintsha kwezinhlelo. Uma uwulalela lo msakazo uzovumelana nami uma ngithi uJustice Ramahlolo wenza umsebenzi oncomekayo ngo 6-9 emsakazweni, alandelwe uDavid Mashabela naye owenza ubulungiswa ngo 9-12.
UNtombi ongena ngo 12-3 uvele angikhumbuze uZookey Zarling, naye ukwenza ukuthi ungasuki emsakazweni. Ngo 3-6 ntambama kungena uGlen Lewis naye olubambe kamnandi, alandelwe uRobert Marawa ogcina ededela uBambo Johnson.
Lo msakazo uyalaleleka, okuhle ngawo uyazi ukuthi ukhuluma nobani. Laba basakazi akumele ngempela bazikhathaze ngokushintshwa kwezinhlelo.
IMetro FM, cha bakhona okumele batatazele, uma ungibuza ngoDJ Fresh ngizokutshela ukuthi ushayela uhlelo, * -Angie Khumalo ufunda izindaba, uMpho Maboi wenza ezemidlalo, uSomizi uphethe izinombolo zabalandeli bakhe ezinkundleni zokuxhumana.
Umsakazi okumele kutatazele ibhulukwe kuyena uBujy ongena noDineo Ranaka ngezimpelasonto, uSpeedsta noLootlove.
Ngisho noMo Flava noMasechaba Ndlovu kuyadingeka ukutatazela kubona ngoba sengathi bathathe uhlelo lwabo balwenza olwezindaba kakhulu.
Uma siza KwaZulu-Natal, kuzomele batatazele nabanye abasakazi boKhozi FM. Uma kungadlalwa, u-6 kuya ku 6 walo msakazo kuzomele kwenzeke okuthize kuwona.
Angisho ukuthi baxoshwe abakhona ngoba banekhono, wukubathatha nje ubabeke ezikhathini ezibafanele, lapho obona khona-ke ukuthi udinga ikhono elisha, sewungalithungatha kodwa ungasebenza ngelikhona ngokuthi ulifake ezinhlelweni ezihambisana nalo.
Abaphathi abayeke ukuzicabangela bona nalabo abasondelene nabo kodwa bacabangele umphakathi noma abalaleli.
Uma siqhubeka siza kwesikaVukile Zondi noMimi K kwiGagasi FM, lo msakazo waziwa njengowabantu abasha.
I-YFM yayinabantu abasha ngemuva kombhobho, behambisana nabantu ababebasakazela.
Ngifikelwa wu-Unathi, Bad Boy T osethanda ukubizwa ngoThomas ngoba ezibona esekhulile, Fresh, Phat Joe nabanye bonke bahamba kwiYFM ngoba sebebona ukuthi iminyaka ayisavumi. Kodwa-ke okuhle ukuthi lo msakazo unabantu abafana noDJ Le Soul, Heazy, Nomfundo Clarissa, Zisto nabanye abancane kodwa abangagqamile kakhulu ngokuthi abashayeli izinhlelo ezingena ngo 6 ziphele ngo 6 kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu.
Mhlawumbe isiqalo nje wukuthi uVukile agxile ekuxhaseni izinhlelo zabantu abasha njengoba wenza, ume kancane ngoDurban Jazz.
Abantu abasha bayalithanda iGagasi FM, ikakhulu ngoba lidlala umculo wabo kodwa-ke nasemoyeni ake kube yibona. Lizothandwa kakhulu ngoba ulimi luzobe lufana, ekhaya nasemsakazweni.